30 Nenjodzi Dzeminamato Yekunamatira Pamurume weMweya weMarine | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 30 Njodzi Dzeminamato Yekunamatira Pamurume weMweya wemuMarine
30 Njodzi Dzeminamato Yekunamatira Pamurume weMweya wemuMarine
Matthew 12:43 Kana mweya wetsvina wabuda mumunhu, unofamba munzvimbo dzakaoma, uchitsvaga zororo, asi unoshayiwa. Zvino unoti: Ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda; Zvino kana wasvika, unowana pasine chinhu, yakatsvairwa, yakashongedzwa. Ipapo unoenda, ndokutora pamwe naye imwe mweya minomwe yakaipa kumupfuura, ndokupinda, ndokugara imomo; kuguma kwemurume uyu kwakaipa kupfuura kutanga. Zvichava saizvozvowo kuzera iri rakaipa.
Midzimu yemakungwa mweya yetsvina, inonziwo mweya yemvura. Iwo mweya mweya yakaipa inotyisa iri kushanda muhupenyu hwevanhu vazhinji nhasi, kusanganisira vatendi. Vazhinji vanhu vanogara munzvimbo dzine nzizi vanoshungurudzwa na masimba erima kubva mumvura, pese paunoona zvakaipa zvichiitika, sekuchiva, kunamata, kudhakwa, kuita mukadzi nezvimwe, iwe unoziva kuti mweya yemvura iyi inotonga munzvimbo idzodzo. Nhasi tichave tichitarisa munzvimbo dzemunamato dzine njodzi kumurume wemweya yemugungwa. Iyi minamato ine munamato ine njodzi ichakununura kubva mumaoko emweya wedhimoni chero ipi zvayo muzita raJesu.
Ndiani murume Yemweya?
OmweMurume Husiku kana Incubus, mweya wemvura uyo unotora chimiro chemurume uye unosungirwa kumukadzi kana vakadzi. Iwo mweya wetsvina ndicho chikonzero nei vakadzi vazhinji vachiona zvichinetsa kuwana. Varume veMweya vanogona kuve midzimu ine godo. Pese panenge paine vakaroora pavanoda kuroora, vanomisa muchato, kungave nekushungurudza mashandisiro emari yemurume, kana kuuraya murume. Varume vemweya vanongotevera vakadzi, sevakadzi vemweya vanotevera varume. Iyi midzimu inogara ichiita rudo kune vanotambudzwa husiku hwese, vakadzi vazhinji vanotoita vana vemweya nemadhimoni aya. Kana iwe uri mukadzi, achitambura nemweya murume kurwiswa, iwe unofanirwa kunge uine chisimba muminamato yako, unofanirwa kuzviparadzanisa ne simba ne Ropa raJesu. Unofanira kubatirira kuna Mwari zvino kupfuura nakare kose kuti unzwe kununurwa kwako.
Nzira yekukunda sei murume wemweya?
Unozvikunda kuburikidza neminamato uye neIzwi. Izwi raMwari rinosvinudza meso ako kuti uone kuti ikozvino wave chisikwa chitsva, uye mwanakomana kana mwanasikana waMwari, uye kuti une simba pamusoro pemadhimoni ese, kana uchiziva zita rako rekunamata, iwe unoti sununguko yako nemoto nechisimba. Unofanira kutaura nechisimba murume iyeye wemweya wetsvina uye nekuuraira kuti ubude muhupenyu hwako muzita raJesu. Jesu vakatipa simba rekudzinga mweya yakaipa, nevarume vemweya madhimoni, saka unogona kuadzingira kunze kuburikidza neminyengetero yakawandisa. Iyi minamato ine njodzi inopesana nemweya wemugungwa inodzoreredza masimba ako muzita raJesu. Namata uyu munamato unongedza nekutenda nhasi uye utorezve kununurwa kwako nekusingaperi muzita raJesu.
Nengozi dzemunamato une njodzi
1. Ini ndinokwikwidza muviri wangu nemoto weMweya Mutsvene, uye ndinoraira mweya yemugungwa yega yega murume, inogara mumuviri wangu kuratidza uye kufa, muzita raJesu.
2. Iwe mweya wa Revhiatani muhupenyu hwangu, ini ndinokutsiura neropa raJesu uye nemoto weMweya Mutsvene, buda izvozvi ufe, muzita raJesu.
3.Sungano dzese dzakaipa, dzichindisunga nemweya yemvura, yakaputswa neropa raJesu.
4.Kushamwaridzana kwakashata kuri pakati pangu nemweya yemugungwa, yakapunzika neropa raJesu.
5. Kese kuzvipira kwakashata, kwakaitwa nevabereki vangu paari satanic, iropa raJesu, riparadze izvozvi, muzita raJesu.
6. Ini ndinoramba uye ndinoramba yese satanic office yandakapihwa, muumambo hwemakungwa, muzita raJesu.
7. Ini ndinoramba uye ndinorega zvese korona yaSatani yandakapihwa, muumambo hwemakungwa, muzita raJesu.
8. Ini ndinoramba uye ndinorasa zvinhu zvese zvasatani zvandinazvo, muzita raJesu.
9. Ini ndinoramba uye ndinoramba chipo chose chaSatani chandakapihwa, kubva kuumambo hwegungwa, muzita raJesu.
10. Chero satanic murindi akapihwa hupenyu hwangu kubva kumamine empire, ini ndinokuramba. Gamuchira moto waMwari ubve kwandiri, muzita raJesu.
11. Kuburikidza neropa raJesu, ndakaregererwa kubva mumaoko eadhiabhori.
12. Ndinoomesa musoro uye ndinogura musoro wemurume wese ane simba muhupenyu hwangu neropa raJesu.
13. Kana paine chero chinhu mandiri chisiri chekwaMwari, ndinozvibvisa zvachose neropa raJesu.
14. Ropa reropa ngarisimuke pakati pangu uye chero rima raro rakapihwa simba kuti rirwe neni.
15. Ini ndinotuka basa rese rerima muhupenyu hwangu kuti ome kumidzi neropa raJesu.
16. Ini ndinokunda, ndonda uye ndadzima mweya wekutsamwa neropa raJesu.
17. Rega ropa reropa raJesu riburitswe pachinzvimbo changu uye ngarirege zvichipokana nemamiriro ese akafa muhupenyu hwangu.
18. Rega simba reropa raJesu riburitswe pachinzvimbo changu uye riite zvarinotaura vachipesana negomo rose risingazungunuke muhupenyu hwangu.
19. Muzita raJesu, ndinomhan'arira ropa raJesu pamusoro pemhuri yangu yese muzita raJesu.
20. Muzita raJesu, ini ndinoisa ropa raJesu pamusoro peimba yangu.
21. Ini ndinotora ndinotora zvinhu zvangu zvese zvepanyika muchengetwe yemweya wemweya, muzita raJesu.
22. Ini ndinoraira murume wemweya kuti atendeukire kumashure kwake nekusingaperi, muzita raJesu.
23. Ini ndinoramba uye ndinoramba zita randakapihwa nemurume wemweya, muzita raJesu.
26. Ndakazvisunungura pasimba renhare, simba rinosimbisa nehusungwa hwemweya wemweya, muzita raJesu.
Previous nyaya3Amondo ehondo Yekunamata Mapepa
inotevera30 Simba Rinonamatira Pfungwa Pakutsveneswa uye Kucheneswa kweMweya Mutsvene
Eunice Kubvumbi 18, 2020 At 6:50 am
Kutenda neminamato inosimudzira. Yakakwirira annointing icharamba iri pauri. Ndichaonga minamato yemazuva ese yakatumirwa kune yangu tsamba yekuwedzera hupenyu hwangu hwemunamato. Ndatenda.
Stephen Oluwatosin Chivabvu 11, 2020 nenguva dza 3:16 pm
Thanks for d yakasimba minamato mapoinzi, akawanda Nyasha muzita raJesu.
Doreen Chikumi 20, 2020 Panguva ya11: 04 pm
Wow minamato ine simba, ndinotenda ndakunda muzita raJesu Kristu
Esiteri Obioma ogechi Chikunguru 3, 2020 Na5: 55 pm
Yakanaka munamato poindi, ndinotenda Mwari akandinunura ndatenda Jesu nekuponesa !!! Ameni
PRESCOVIA ABISHAG Kukadzi 22, 2021 At 3:04 am
Ndinokutendai ISHE MWARI nekushandisa mushandi wenyu kuti ndikwanise kusunungura minamato yemabara kuburikidza neplatform iyi, muzita raJesu ndakasununguka zvechokwadi, AMEN.
Abiade Abibat Chikunguru 28, 2020 At 4:38 am
Kutenda neminamato ndinotenda Mwari akandinunura
Faith Nyamavhuvhu 19, 2020 At 9:40 am
Ndatenda Jesu ndasununguka ndinunurwa kubva kumweya wetsvina
Runako IKPEKPE Nyamavhuvhu 27, 2020 At 9:27 am
Ndatenda Ishe nekundinunura pasimba chero ripi zvaro. Ropa raJesu Kristu rinoramba richitaura kwandiri uye neveimba yangu. Ameni
Ishe ndinokudai zvisati zvakamboitika, ndibatsireiwo kurwa uku. Handina munhu anokudza iwe ISHE
Lungy Malambule Nyamavhuvhu 3, 2020 At 11:11 pm
Ishe ndibatsirei kukunda chero dhiyabhorosi chakadyarwa muhupenyu hwangu Iin Jesus name
Zvakanaka Gunyana 4, 2020 At 7:15 am
Ndinotenda nekuda kwemasimba ekunamata aya, ndasununguka kubva kumweya wasatani nezita raJesu amen
Sis chioma Ndira 9, 2021 At 12:09 pm
Wakaenda kunonunurwa. Uye mukadzi mufundisi akanditi nditenge cheya chena + cheya ine ruvara, bhaketi chena uye mutsvairo. Zvese izvi ndezvebhaibheri here? Cos ini handidi kuita chero chinhu chinopesana neshoko raMwari.
Ndokumbirawo, ini ndoda mhinduro yekukurumidza
Christina Ng Paz Ndira 18, 2021 At 8:49 am
Eso no es nada bíblico. Al contrario parece brujería. Ten cuidado y aluejate de estágá y estános. Sa y y yununa y Mayo. Pídele dirección y una fuegue donde puedas servir. Bendiciones 🙌💜
Damilare Kukadzi 18, 2021 At 10:11 am
Noo .. I did all of dis and is still d same .. u can only deliver ur self by yourself nemunamato
Shitta Kurume 9, 2021 At 6:43 pm
Havasi vemubhaibheri ma
.. izvi zvinongopa mhinduro yenguva pfupi kune dambudziko risingaperi .. vanozorora kwechinguva kukuita iwe kuti ufunge kuti wakunda, kungo tangazve kudzokera kuzoshanda nesimba rakazara. Kununurwa kwechokwadi uye kwakazara kunowanikwa muIzwi raMwari uye neMinamato inotungamirwa neMweya .. Ini ndichakukurudzira kuti utange watsvaga "kereke inotenda bhaibheri" panoparidzwa shoko rakashata raMwari. Kuziva zvakaitirwa iwe naKristu uye nekodzero yaunayo maAri kwakakosha kuti ugare uchikunda
Precious Kurume 4, 2021 Pa 10: 51 am
Ndatenda nenyaya yekunamatira ndatambura neiyi mweya yemurume chinhu kwegore kutarisira kuti Mwari vandisunungure 😭😭😭🙏
Daphne mune dzimwe mitauro Kubvumbi 5, 2021 At 11:23 am
Chinhu chisina kujairika chakangoitika pandanga ndichienda nemunamato yezvinhu..chimwe chinhu chakangoita sedzvinyu ,, forn in colour yakabuda uye yaive pa celling
Lucia Chikunguru 29, 2021 Na7: 31 pm
Krachtige gebeden wat ik nodig anga achida ik heb yekupedzisira
Lucia Chikunguru 30, 2021 At 7:18 am
Mazvita groentje powerfull minamato Mwari vakanaka
Ruth Nhema Nyamavhuvhu 12, 2021 At 8:16 am
Mhoro Mufundisi ndinokutendai neiyi Minyengetero yeHondo dzeMweya kupokana neEvil Night Muroorani Midzimu, Ndiri Kuireurura Husiku hwese, Ndokumbirawo mundibatsire sezvo ndave kumagumo angu, nekuti ndatsanya nekutsanya nekutsanya, Kunamata uye Kuderedza uye Ndakareururwa, asi hapana zvinoita sekumisa, ndinorarama Hupenyu hwakachena ini ndiri ndega mumwe ndichiita chero chimiro cheBonde Chiitiko chero chimiro kana fomu, uye ini ndanamata ndichipesana nezvose Kutukwa Kwekwake ndikapfidza chero kutsamwa kana Hasha, asi hazvisi kuzondisiya ndiri ndega, uye pese pese paunonamata uchipesana neLeviathan ini ndinorwiswa ndinongofanira kutaura zita rayo uye ndakarwiswa zvinotyisa mumuviri wangu, Ndokumbirawo mundibatsire maita basa. 🙏🙏 Mwari vakuropafadze 🙏
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Kuora Mwoyo
Kununurwa Minamato Kubva Kukukutu Kwekukuvara